မိုက်ကယ်ရူးမေကာ အလွန် မန်းတလေး အဲကွန်းဘက်စ်ဒရိုက်ဘာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » မိုက်ကယ်ရူးမေကာ အလွန် မန်းတလေး အဲကွန်းဘက်စ်ဒရိုက်ဘာများ
Posted by ေမာင္ ေပ on May 30, 2011 in Events/Fundraise, Myanma News | 13 comments
မန်းတလေး မြို ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဒုတိယ မြို ့တော် ဖြစ်သည် နှင့် အညီ တိုးတက်ခေတ်မှီလာလျက် ရှိသည် ။ အထွေအထွေ တိုးတက်မှများ နှင့် အတူ ယာဉ်လိုင်းများ အထူးသဖြင့် အဲကွန်း ဘက်စ် ကား လိုင်း ( အဲကွန်း လုံးဝ မဖွင့်ပါ ) ၂ လိုင်း တိုးတက်လာသည် မှာ ၂ နှစ်ကျော်ပါပြီ ။ ကောင်းမွန်ပါသည် ။ သက်သာသော ယာဉ်စီးခ နှင့် လိုရာ ခရီးသို ့သက်သက်သာသာ သွားလာနိုင်ပါပြီ ။ ရွှေမန်းမေ နှင့် အေးချမ်းမောင် ဖြစ်မည် ထင်ပါသည် ။ ယခု စာကို ရေးသား နေသော်လည်း ထို ကားများ ကို မစီးဖူးပါ ။ ရေးချင်သည် မှာ ဆရာ အဲကွန်းဘက်စ်မောင်းသမား များ ၏ မောင်းပုံ မောင်းနှင် နည်းလေး ။ ” ကညန ” တွင် လိုင်စင် မည်သို ့ဖြေလာခဲ့သည် ကို မသိရသော်လည်း ဆရာသမား တို ့၏ မောင်းပုံမောင်းနည်း လေးများ မှာ အထူးပဲ ပညာ ယူစရာ ကောင်းသည် ။ လမ်းရှင်းရှင်း မရှင်းရှင်း လီဗာဇွတ်နင်းသည် ။ ဟွန်းပေါ ်တွင် လက် အချိန်ပြည့် ထောက်ထားသည် ။ အထူး လေးစားစရာ ကောင်းသော အချက်မှာ လမ်းပေါ ်တွင် ခရီးသည် တွေ ့လျှင် လမ်းဘေးသို ့ကပ်ရပ်ခြင်း လုံးဝ မရှိ ။ လမ်းလည် ခေါင် တွင်ပင် ခပ်တည်တည်ရပ်ပြီး ခရီးသည် တင်သည် မှာ ခရီးသည်များကို လွန်စွာ တန်ဖိုးထားကြသည် ဖြစ်မည် ထင်သည် ။ တစ်ကယ်လို ့စာဖတ်သူ သည် မန်းတလေး မြို ့သား သော် လည်းကောင်း အခြားမြို ့မှ ခဏ လာရောက်နေသော သူ သော် လည်းကောင်း မန်းတလေး လမ်းမ များပေါ ်တွင် ယာဉ်မောင်းခဲ့မည် ဆိုလျှင် ဘုရားစာ ကို နောက်မှ ရွတ်ပါ ။ အထက်ပါ အဲကွန်းဘက်စ်ကား များ ကို အရင် သတိထား ပါ ။ လွတ်ပြီဆိုမှ သာ ဘုရားစာ ကို စိတ်ချ လက်ချ ရွတ်ပါ ။ မဟုတ်ပါက ဘုရားစာ မရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ် ရမှီ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်မည် ကို စိုးရိမ်မိသဖြင့် ရေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
မန္တလေးဘိုးဘိုးကြီး ဦးပေါက်ရဲ့ မှတ်ချက်သိချင်လှပါတယ်..။
ဘိုးဘိုးကြီး ဆိုတာ… ရှေးကနေအခုထိရှိ်ပြီး. နှံ ့စပ်တဲ့….ရှေ့မှီနောက်မှီတွေကို ..နောက်ခေါ်တာလို့မှတ်ပါနော…။
အရင်က စစ်ကိုင်းကားဆိုရင် ပြိုင်စံရှားပေါ့။ အခုတော့ သူ့ထက်စွာတဲ့သူတွေ ပေါ်လာပါပြီ။
မန်းတလေးမှာ သွားလာရတာ ထင်သလောက် မလွယ်ကူ။ စက်ဘီး ဆိုက်ကား ဆိုင်ကယ် ကား တွေ အနှေးယာဉ် အမြန်ယာဉ် တွေ ကြားထဲမှာ အခြေအနေကြည့် ပြီး လှုပ်ရှားသွားလာရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ မန်းလေး ရဲ့ လမ်းမပေါ်က အကြောင်းလေးတွေကို လေးပေါက်က ဆက်လက် ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။ မန်းလေးရဲ့ ရှေ့ မှီ၊ နောက်မှီ၊ တောင်မှီ၊ မြောက်မှီ၊ ဆိုတော့ လေးပေါက် ရဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးတွေ လဲ ပြောပြပါအုန်း…
အော်အခုတော့ မန္တလေးက စစ်ကိုင်းကားထက် အေးချမ်းမောင်ကိုကြောက်နေရပြီလား
မန္တလေးက ကိုယ့်နားလည်မှုနဲ.ကို ဆိုင်ကယ်၊ကား မောင်းနှင်နေကြတာပါ.. မော်တော်ပီကယ်တောင်မလိုဘူး.. သူတို.ပါမှပိုတောင်ရှုပ်သွားသေး..
တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကိုယ့် Speed ကိုနိုင်ရင်အေးဆေးပါ.. မန္တလေးမှာ ဆိုင်ကယ်၊ကား မကျွမ်းကျင်ပဲ သွားမမောင်းလေနဲ.
Break နဲ. ဟွန်း အသေသာကိုင်ထား…
ဒါဆို ဘေးကင်းမယ်… ဟိုနေရာကဖြတ်ထွက် ဒီနေရာကဖြတ်ထွက် လျှက်တပြက် ရှောင်ရရှားရတာ .. ဟဟ သဲထိန်ရင်ဖိုပဲ
နောက်ဆုံးပေါ်signal အချက်ပြ နည်း လေး ကို လည်း ဝေမျှ ပေးလိုက်ဦးမယ် ။ စက်ဘီး နင်းနေတဲ ့သူ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ကယ်မောင်းနေတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ တို ့ရဲ ့ခေါင်းကလေး ညာဘက် သို ့သော် လည်းကောင်း ဘယ်ဘက် သို ့သော် လည်းကောင်း မသိမသာလေး စောင်းခဲ့ ပြီ ဆိုလျှင် ထို စောင်းသည့်ဘက် မှ ယောင်လို ့တောင် မကျော်လိုက်လေ နှင့် ။ သူ ကွေ ့တော့မည် ဖြစ်သဖြင့် ခေါင်းလေး မသိမသာ စောင်းခြင်း ဖြစ်သည် ။ ကိုယ်က အထာမနပ် ပဲ သွားကျော်လို ့လို ့သူ အကွေ ့မှာ accident ဖြစ်ရင် ဆရာကြည် ရဲ ့စကား လို ဆိုရင် ” ကွိုင်လတ်ပြီ ငါ့ကောင် ” ၊ လျော်ပေတော့ ကိုယ့်လူ ပဲ ။
နေပြည်တော် ပေါ်လာပြီးကတည်းက မန္တလေးက အော်တိုမက်တစ် တတိယမြို့တော်နေရာ ရောက်သွားပါကြောင်းနှင့် စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်သော ယာဉ်လိုင်း တည်ထောင်သူများမှာ ဆရာ့ဆရာကြီးများဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် ဂိမ်းထဲမှာမောင်းသလို မောင်းနှင်နေပါကြောင်း ဖြည့်စွပ်လိုက်သည် … ။
ဟုတ်တယ်ဗျို ့..မန်းလေးမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နောက်က ဆိုင်ကယ်
လိုက်စီးတာ တော်တော်လန် ့သွားတယ်။လမ်းကြောအထာမသိရင် ဂိ
မန်းဂေဇက်မှာ မန္တလေးက မန်း အဲဘစ်အကြောင်း မမှန်စကောင်း မှန်စကောင်း ဆို တာ မန်းပေါက်ပါက် မှ မန့် ပေးပါရန် …………။
မန်းလေးသားကိုပေါက်က မန်းလေးလမ်းနဲ့ကားကို ကဗျာလေးနဲ့ပြန်အဖြေပေးမယ်နော်
သိပ်ရှည်တော့ဘူးနော် (မှတ်ချက် စိတ်)
မြန်မာပြည်မှာ လမ်းစည်းကမ်း အပျက်ဆုံးကတော့ မန္တလေး လို့ပြောရင် စိတ်ဆိုးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကားကြီးကွင်းတွေထဲမှာလည်း ခရီးသည် ကြို/ပို့တွေက ဓမြ တိုက်ပြီး ဝိုင်းလုနေသလိုပါပဲဗျာ..။
စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာ.. တကယ်လဲဟုတ်နေတာပဲကို… ကျွန်တော်လဲ မန္တလေးသားပါပဲ.. ကျွန်တော် မန္တလေးမှာနေတုန်းကလဲ စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းချင်သလို မောင်းတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်လဲပါတယ်.. ရန်ကုန် ကိုရောက်မှ ကားကို စည်းကမ်းတကျမောင်းတက်သွားတယ်.. လမ်းစည်းကမ်းဆိုတာကို လဲနားလည်သွားတယ်… ၄ လပိုင်း မန္တလေးခဏပြန်တုန်းက ကျွန်တော် ကားမောင်းရမှာ တော်တော် စိတ်ညစ်သွားတယ်.. ဆိုင်ကယ်တွေကလဲရှုပ် လမ်းစည်းကမ်းဆိုတာလဲ ၁၀ဝ မှာ ၁ဝ ယောက်တောင် နားလည်ပါ့မလားမသိဘူး.. ကွေ့မယ့်လမ်းကြောကိုယူပြီး တည့်ထွက်လိုထွက်.. မီးပွိုင့်နီနေရင်လဲ လွတ်သေးတယ် လွတ်သေးတယ် အော်ပြီး ဇွတ်ဖြတ်မောင်းလိုဖြတ်မောင်း.. ချိတ်မိသွားရင်လာဦးမယ် ယာဉ်ကြီးနဲ့ယာဉ်လေး အမှု ဆိုပြီးတော့ သူတို့ယာဉ်လေး (ဆိုင်ကယ် စက်ဘီး) တွေ စည်းကမ်းမရှိ မောင်းချင်သလိုမောင်းနေတာကျ အပြစ်မဟုတ်ဖူးလား…
နိုင်ငံတာ ကားပြိုင်ပွဲဝင်လျှင် ထိုထိုသော ယာဉ်မောင်းများ ဆုကြီးကြီးရမှာ သေချာလှပါသည်။ ပထမ ရရန်တော့သိပ်မသေချာပါ…
ထိုသူများထက်တော်သော ထော်လာဂျီ ပြိုင်မောင်းသမားများ စိတ်တိုင်းကျ မောင်းနှင်လေ့ကျင့်ခြင်းများသည်လည်းကောင်း ရှိ နေသေးပါသည်။ ကြည့်ရှုအားပေးသူယာဉ်ထိန်းကိုကိုများကတော့ ပွဲလှဘို့ပျော်ပျော်ကြီး အားပေးနေကြတာ ရွှေမန်းသားတိုင်း သိကြပါတယ်။ မြေသယ်ကားကြီးမောင်းသမားများ၊ကုန်ကားကြီးသမားများလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲဦးမည်ထင်ပါသည်။
အများသူငါ သွားလာရာလမ်းမကြီးပေါ်မှ မတန်တဆ အရှိန်နှင့် လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းနှင်လာသော ကုန်ကားကြီးတစ်စီးနှင့် မိမိစီးနင်းလာသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်စုတ်ချာချာလေးမှာ မျက်နှုာချင်းဆိုင်တဲ့တဲ့ကြီးတိုးရာ အသက်အပိုမပါသော စာရေးသူမှာ နီစပ်ရာလမ်းဘေး မြောင်းထဲသို့ ရုတ်တရက်ချက်ချင်း ဆင်းပြေးခဲ့ရာ အသက်ဘေးမှသီသီလေးလွတ်ခဲ့ပါသည်။ မိမိမှာလည်း ခေသူ မဟုတ် လျှာနဲနဲရှည်သူဆိုတော့ ဒီအတု်ိင်းဘယ်နေမလဲ၊ နီးစပ်ရာ ယာဉ်ထိန်းရဲကိုကို့ ကို အားကိုးတကြီး အကူအညီတောင်း တိုင်ကြားတော့ ဘေးမသီရန်မခပဲ မြောင်းထဲကပြန်တက်လာသော အီဖေကို ကိုလျှာရှည်ကို ကူညီပေးရှာပါတယ်။ ခင်ဗျား ဘာဖြစ်သွားလို့လဲ…ဘာမှလဲမဖြစ်ပဲနဲ့လျှာကိုရှည်တယ်…. တဲ့ဗျာ .. ကဲ.ဟုတ်ဘူးလားဗျာ.. နံမည်ကိုက ကိုလျှာရှည်လေ..။
ဆက်ပြောပါသေးတယ်.. ဒို့ကဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး..တဲ့ဗျာ၊ မိမိမှာလည်း အသက်အပိုမပါလာတော့ ဘာမှမဖြစ်အောင် ရှောင်ပေးရတာပေါ့၊ ထိုထိုယာဉ်မောင်း မောင်မင်းကြီးသားကို အရေးယူနိုင်ဘို့ မိမိအသက်ပေးဘို့အထိ မစွန့်စား ရဲတာ ကိုရှာရှည့် အပြစ်လားဗျာ…. ဒါဆို ဘယ်သူ့မှာ……………………?????
ဟုတ်တယ် မန်းလေးတစ်ခေါက်ရောက်တုန်းက ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ မောင်းချင်သလိုမောင်းနေကြတာ ဘယ်လိုကားလမ်းကူးရမယ်မှန်းမသိလို့ လမ်းလယ်ခေါင်မှာ တိုက်ချင်တိုက်ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ရပ်နေလိုက်မှပဲ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေက ရပ်ပေးမှပဲကူးဖြစ်လိုက်တယ်။ တော်သေးတယ် ….. မတိုက်သွားလို့နော် ….